Imba>Our Services>Lift Inorema>Kusimudza & Kuisa
Mhando dzakasiyana-siyana dzekufambisa dzinofanirwa kuitirwa kutakurwa kweanorema cargos muzvirongwa zvekunjiniya nekune dzimwe nyika, izvo zvinowanzobvumidzwa nenzira yekufambisa yakadai sekusimudza huwandu, mamiriro emigwagwa, mugwagwa uye bhiriji kurodha huwandu, mugero hupamhi nekureba. uye mimwe mitemo yemuno, ichiita kuti maitiro ave akaoma uye akaomarara.
Maitiro ekupedzisa kutakura kweanorema cargos zvakachengeteka, mune zvoupfumi, nenzira inobudirira uye zvine musoro ndiwo musimboti wekuti basa rakabudirira riite.
Kufambiswa kwemotokari dzinorema kuchatarisa mamiriro chaiwo, nzvimbo yekugadzira, nzira yekufambisa, nzira dzekufambisa, kurodha uye kuburitsa chiteshi, pane-saiti yekumisa zvishandiso nezvimwe zvinhu zvinoenderana uye zvakafanira kuti uite kuferefeta ongororo.
Kubudirira kukwira kweanorema cargos ndiyo yakakosha poisheni yekuitwa kwemabasa einjiniya. Mamwe matanho anofanirwa kuteedzerwa kuve nechokwadi chekubudirira kupedzisa kwekusimudza nekuisa.
1.Equindows pane-saiti kuronga: ronga izvo zvinorema zvekudzikisa uye kuisa mushure mekugadzirira kwese kwapera.
2.Preparation basa usati wasimuka: kunyatsoongorora uye kuongororwa kunodiwa.
Semuenzaniso.Tarisa uone kana michina yacho iine mamakisi ekuisa uye nemhete dzemakona dzakatarwa kunyangwe masekeji ekusimudza emidziyo anosangana nezvinodiwa zvekusimudza
3.Lashing of hoisting rigging: inonyanya kusanganisira kuturika lugi yeparsley, yekunetseka bvunzo uye kugadzirisa azimuth yemagetsi winch, zvigadziriso zvekumira uye yekukweta system.
4.Kusimudza muedzo: pamberi pomuedzo, tarisa uye simbisa zvinotevera.
5.Kusvikira pane-saiti: mukuru-mukuru-mukuru anoraira zviri pamutemo vateresi vese kuti vatarise mamiriro ezviratidziro uye nekutarisa kana chiratidzo chechiratidzo ichi chakajairika; uye zivisa weti yakatemwa vashandi nemasaini.
Munguva yekusimudza, ita kuti zvishandiso zvimire paunosiya rubatsiro rwenguva pfupi pamusoro 500-800mm uye ita kumwe kuongororwa kuti uve nechokwadi kana zvese zviri kufamba zvakanaka;
Inotevera kubvisa tsigiro yemidziyo uye ramba uchisimudza.
Mashini ekushandisa kwekusimudza crane
1.Kusimudza kana kuburuka
(1) Kuwedzeredzwa kana yakawandisa torque zvakanyatsorambidzwa zvichiteerana nerondedzero yemutoro.
Rambidza kurega kubatana ne ACS system panguva yese ye crane operation process.
Prohibit kudhonza mutoro cargos kubva kumberi kana parutivi rwe ruoko.
Prohibit inosimudza mutakura kubva kumberi kwekabati.
(2) Usasundire pasi uye dhonza the joystick yakaoma panguva yekuvhiya.
Usati wasimudza, ita shuwa clutch lever iri munzvimbo yekubvisa.
(3) Mahara kudonha mashandiro anogona chete kushandiswa kana uchidonhedza hove kana kana mutoro uri pasi pe30% yemutobvumirwa mutoro. Emergency braking mukusununguka kudonha inorambidzwa.
(4) Yekukwira chigubhu vhiri rinofanira kukiyiwa kana uchisimudza mutoro wenguva yakareba yakagara. Asi usavhara chigaro chegubhu uchidzika pasi mutakuri.
(5) Teerera nyevero kana uchisimudza kushanda.
(6) Hapana munhu anopinda munzvimbo yekusimudza basa kunze kweavo vanasaina.
(7) Munguva yekusimudza, chengetedza chinhambwe chekuchengetedza pakati pepamusoro pebom uye pakati petsetse pakati pe ①6.6kv / 3m ②66k / 5m③275kv / 10m, kana paine tsaona yemagetsi yekushamisika.
(8) Kana mawere maviri akasimudza chitakura pamwe chete, mutungamiriri akabatana anodikanwa. Kunze kwezvo, mashandiro nekumhanyisa kwema crane maviri aya anofanirwa kuramba akafanana. Mutengo wega wega wakagoverwa unofanirwa kunge uri pasi pe80% yehuwandu hwakatemerwa mutengo mumwechete; Huremu hwemutoro unorema haungapfuuri makumi manomwe neshanu muzana ezviyo zvemeshini mbiri.
(1) Regedza chero emergency emergency brake kana chinja kuitira kuti njodzi yacho ironge.
(2) Munguva yekutendeuka, mutyairi anofanira kutarisisa kana paine vanhu vari muchikepe kana chero zvipinganidzo kumashure.
(3) Kiya mabhureki anotendeuka kana wapedza.
3.Kusimudza telescopic boom lever
(1) Hapana wekuwedzera mutoro uine ruoko lever.
(2) Kana iyo telescopic boom iri mukushandisa, panofanirwa kunge paine chinhambwe kubva pakati peataki nehuku.Panosimudza ruoko rwekunze, hove inofanira kuramba yakaderera sezvinobvira.
Iyo vhiri crane inotakura nemutoro
Kana cheya vhiri inotakura nemutoro, mugwagwa unofanirwa kunge wakasununguka uye wakasimba, uye uremu hunorema hunofanirwa kuenderana nemirau yemugadziri .. Kureba kwemaregi makuru kunorema hakuzi kupfuura 50cm kubva pasi, kusungirirwa netambo yekudhonza.Mching slowly.
Yakareba - chinhambwe kutyaira nemutoro inorambidzwa zvakanyatso
5.Operation matipi mushure mekusimudza
Kugadzirisa iyo hove sekudikanwa uye bvarura tafura inotenderera
(2) Makumbo achadzoserwa munzira yakatarwa uye akachengetedzwa
(3) Dhiraivha crane kudzokera kunzvimbo yekupaka
Sohologistics inokwanisa kupa dzakasiyana siyana dzekusimudza uye yekumhanyisa michina s kuita shuwa yekubudirira kubudirira kwega yega inorema cargos projekiti zvinhu.
Midziyo mikuru yekusimudza inosanganisira forklift marori, matiraki emakara, cranes zvinokambaira, yakazvimiririra yega module yerori (yega-yeinodzima hydraulic flatbed terori) tara,
KUKOSHESA RENTAL DZESHURE MUCHINA
mhando MABHARA CRANES SELF-PROPELLED MODULAR TRAILERS SIMBA CRANES ROUGH TERRAIN CRANES CRAWLER CRANES MABHUKU
Rated Mutoro Range
Jacking uye skidding inoshandiswa zvakanyanya pakufambisa zvivakwa zvakakura panguva yega yega Sohologistics mapurojekiti ekugadzirisa. Aya mashandiro anobudirira kwazvo nehunyanzvi hwekuita zvechigadzirwa uye zvikwata zvekushandisa.
Senguva dzose, munzira yekugadzira bespoke mhinduro kune vatengi vedu, kuchengetedzwa kunoramba kuri iko kukuru kwekufunga.
1.Hydraulic jacking uye skidding pfupi sumo
Hydraulic jacking uye skidding envelopu tekinoroji ine zvikamu zvitatu: njanji, yekurara uye hydraulic jacking uye skidding mudziyo system.Chinokosha cheiyi tekinoroji yekuvaka ndeye kushandisa kwe hydraulic jacking uye skidding kifaa. Iyo inonyanya kuve yakaumbwa neye super yepamusoro yekumanikidza mafuta pombi station, yakaparadzaniswa hydraulic jack uye mu-orbit inorema inotakura zvinhu inofamba.
2.Hydraulic jacking uye skidding technical musimboti uye yekuvaka tekinoroji
(1) Nhungamiro yehunyanzvi
(2) Tekinoroji yekuvaka
Kuvaka maitiro kuyerera:
Kuongorora iyo inoshandura nzira inofamba
Kufambisa nzira uye kuchenesa nzvimbo
Jacking shanduko ne hydraulic kumanikidza
Shanduri mune chinzvimbo
Shanduko jacking uye kuburuka ne hydraulic kudzvanywa
Kugamuchirwa kwemhando yepamusoro